I-Perfect Oceanfront Loft Retreat - I-Airbnb
I-Perfect Oceanfront Loft Retreat
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Suzanne
I-Wonderful Oceanfront Retreat - Amakamelo okulala amabili / indawo yokugeza eyodwa kanye ne-lanai enkulu elindile! Indawo ehlala olwandle ethokomele futhi elula enamagumbi okulala ama-2, ukugeza oku-1 kanye nekhishi eligcwele. Zibone uhlezi kule lanai emangalisayo ubuka iPacific enhle!
Okuwukuphela kwendlela yokuhlala useduze nolwandle kungaba sesikebheni. Hlala ubukele imikhumbi ehamba ngomkhumbi idlula kancane wazi ukuthi abagibeli abagibele banomona ngempela ngezindawo zakho zokuhlala ezinhle. Leli khaya elimangalisayo nelingenasizotha lesibili linikeza cishe amadigri angu-180 olwandlekazi lwePacific olunamandla lapho ungaphumuza khona futhi ubukele imikhomo njengoba igqekeza ngokuzumayo amanzi aluhlaza, amahlengethwa angama-spinner ajaha umkhumbi wokudoba odlulayo kanye nelanga eliphumayo njengoba likwamukela esikebheni. uxhaxha emangalisayo imibala ekuseni. Uma ufuna iFive Star Luxury Hotel akusiyo indawo yakho lena. I-Loft imayelana nokubukwa! Ngakho-ke, uma ufuna indawo ehlanzekile nelula yokubeka ikhanda lakho enikeza imibono emangalisayo khona-ke lokhu kungase kube ukukhetha kwakho. Sifuna izivakashi zethu zijabule ngendawo yazo yokuhlala ngakho-ke sibeka obala mayelana neLoft.
Sicela uqaphele lapho usebenzisa izitebhisi eziya endaweni ephakeme ngoba zingashelela uma lina. Siphakamisa ukuthi usebenzise isitimela sesandla uma kumanzi noma uma ungagxilile ukugibela izitebhisi.
IMITHETHO YOKUQASHISWA NGEVAKESI ESIKHASHANE
A. Amahora okuthula azoba kusukela ngo-9pm kuye ku-8am ngaleso sikhathi umsindo ovela endaweni Eqashisayo Yesikhathi Esifushane Ungeke uphazamise ngokungafanele omakhelwane abaseduze.
B. Umsindo ozwakalayo ngale kwemingcele yendawo phakathi namahora angathuli akumele udlulele kunalokho obungahlotshaniswa nendawo yokuhlala.
C. Izimoto zezivakashi zizopakwa endaweni emisiwe yokupaka.
Inikezwe ilayisense yi-Hawaii County STVR #19-364073 NUCR#20-1559
ubusuku obungu-7 e- Hakalau
Yeka indawo ekahle yokuvakasha eHawaii. Ikhaya lisedolobheni elidala laseHakalua; imizuzu eyi-15 yokushayela emfushane ukhuphuke ngomgwaqo onguthelawayeka ovela e-Hilo. Lokhu kukuvumela ukuthi usondele ngokwanele ukuze uthole ukunethezeka kokuthenga nokudla ngenkathi unikeza ubumfihlo obumangalisayo kanye nolwazi lwangempela lwesi-Hawaiian ngesikhathi esisodwa.
Uhambo lwezinsuku ezimfushane oluhle lwenza indawo ibe ilungele umhambi ofisa ukubona yonke into enikezwa yi-Big Island. I-Akaka Falls State Park iyimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka ekhaya. Ubuhle beNani Mau Gardens emaphethelweni e-Hilo uhambo olufushane lwemizuzu engama-20. I-Waipio Rim Valley enhle iyimizuzu engama-45 kuphela uma ushayela ukhuphuka ogwini oluhle lwaseHamakua. Ukuhamba kahle nokubuka indawo kukulindile eHawaii Volcanoes National Park nayo eqhele ngemizuzu engama-45.
Ikhaya liwuhambo olufushane lwemizuzu engama-20 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Hilo futhi cishe amahora angu-1 1/2 ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Kona.
My name is Suzy and I live in Pepeekeo Hawaii, just outside of Hilo. I'm thrilled to be managing these beautiful homes and can't wait to share my hometown and island with you.
Please let me know what ever I can do to make your island vacation a memorable one!
PS My husband's name is Peter
My name is Suzy and I live in Pepeekeo Hawaii, just outside of Hilo. I'm thrilled to be managing these beautiful homes and can't wait to share my hometown and island with you.…
Sihlala imizuzu eyi-15 futhi sitholakala njalo ngocingo. Okwamanje senza ukuhlola ngaphandle kokuthinta ngenxa ye-covid. Sifuna ngempela ukuthi usijabulele isikhathi sakho ekhaya futhi uzizwe sengathi usendaweni yakho yangasese, eshisayo. Sihlala eduze futhi sizotholakala uma udinga okuthile okunganikeziwe kakade.
Sihlala imizuzu eyi-15 futhi sitholakala njalo ngocingo. Okwamanje senza ukuhlola ngaphandle kokuthinta ngenxa ye-covid. Sifuna ngempela ukuthi usijabulele isikhathi sakho ekhaya f…
Inombolo yepholisi: STVR# 19-364073